Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra fantatra amin'ny anarana; "Ayo". Ny tantaran-tsarin'i Ayoze Perez tantaran-jatovo momba ny tantaram-piainan'ny tantaram-piainana tsy mbola voatanisa dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana hatramin'ny fotoana nahaterahany hatramin'izao.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood - Ny fanadihadiana amin'ny daty. Bola ho an'ny Alchetron sy ny tanjona
Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny fanabeazana / ny asa fananganana, ny fiainam-pianakaviana tany am-boalohany, ny lalana mankany amin'ny tantara, ny tantaram-piainana, ny fiainana fifandraisana, ny fiainan'ny tena manokana, ny fiainam-pianakaviana,
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizan'izy mivady amin'ny fampifanarahana amin'ny toerana manapotipotehina izay mahatonga azy ho "Mr Reliable". Na dia izany aza, afa-po vitsy monja amin'ireo mpankafy baolina kitra no mihevitra ny biography of Ayoze Perez tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka izao, ny anarany feno dia Ayoze Pérez Gutiérrez. Ayoze Perez, izay matetika antsoina hoe teraka tamin'ny 23 Jolay 1993 tao Santa Cruz de Tenerife, Espana. Ity ambany ity ny sarin'ny ray aman-drenin'i Ayoze Perez izay teratany ao amin'ny Nosy Canary any amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'i Afrika.
Ny ray aman-drenin'i Ayoze Perez. Bola amin'ny Instagram
Mifanohitra amin'izay heverin'ny ankamaroan'ny mpankafy azy fa ny fianakavian'i Ayoze Perez dia avy amin'ny nosy iray afrikanina tandrefana lavitra an'i Espana. Ny nosy iray noforonin'ny Espanya ary hita ao amin'ny Ranomasimbe Atlantika, 100 kilometatra andrefan'ny Maroc izay no toerana akaiky indrindra azy.
Ny tantaram-pianakavian'i Ayoze Perez sy ny nahaterahany. Credit ho an'ny MJ, Premier League ary Wikipedia.
Niparitaka be avy amin'ny fianakaviana iray antonony, i Ayoze dia nandany fotoana maro niaraka tamin'i Samuel na Sammy, zandriny lahy, sary eto ambany niaraka tamin'ny zandriny lahy sy ray aman-dreniny.
Ny fianakaviana Ayoze Perez. Bola amin'ny Instagram
I Ayoze Perez koa dia nihalehibe tao amin'ny tranon'ny fivavahana iray, avy amin'ny sampana katolika Kristiana Kristiana izay fikambanana ara-pinoana lehibe indrindra amin'ny 84.9% ny mponina ao Tenerife.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Fanabeazana sy fanabeazana
I Ayoze Perez dia sary an-kavia, sarin'i Samuel rahalahiny. Bola amin'ny Instagram
Nandritra ireo faramparan'ny 1990, ny nosy tenenan'i Tenerife dia natahotra noho ny tabataba baolina nataon'i Ayoze sy Sammy bevohoka. Raha mbola nihalehibe izy ireo, dia niara-nilalao baolina kitra ireo mpivady isan'andro isan'andro na tany an-tsaha na tao an-tranony.
Ireo izay nahafantatra azy ireo dia hamariparitra ireo tovolahy ireo ho kintana ho avy izay manana fifandraisana manokana sy fahitana fahita amin'ny televiziona eo amin'ny lalao. Tany am-piandohana dia samy niaina ny nofinofy ny fanabeazana baolina kitra tamin'ny alalan'ny akademia. Amin'ny alàlan'ny fikarakarana fanao amin'ny tifitra an-dranomasina, ny ray aman-drenin'i Ayoze Perez dia nanapa-kevitra ny hanangom-bolo ny zanany lahy ao amin'ny Akademia malaza ao Tenerife, CD San ​​Andrés.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fientanam-po ho an'ny baolina kitra sy ny filàna fanehoana ny talentany dia nahita an'i Ayoze sy Sammy niditra an-tsehatra tao amin'ny lisitry ny faritra teo an-toerana, CD San ​​Andrés.
Raha i Ayoze kosa dia mpilalao baolina matihanina miditra, i Samuel rahalahiny zandriny no nandroso. Nanaiky ny ray aman-drenin'izy roa lahy fa samy nilalao tao amin'ny ekipa iray izy ireo mba hahafahan'izy ireo miara-mipetraka. Ny fampisehoana miaraka amin'ny ekipa iray ihany dia nahita an'i Ayoze nilalao tamin'ireo mpilalao lehibe izay nahatonga azy ho matotra haingana.
Taorian'ny fandaniana ny 4 taona tao amin'ny CD San ​​Andrés, tanora Ayoze dia nanao fihetsiketsehana tany amin'ny UD Santa Cruz, akademia malaza amin'ny tanora mpilalao tanora ao amin'ny Akademia Tenerife izay iray amin'ireo an-dalamby lehibe indrindra ao amin'ny nosy.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Road to Fame Story
Ny fanirian-daza sy ny vavaka nataon'i Ayoze ho lasa mpilalao baolina kitra malaza amin'ny Tenerife dia tsy nandeha tahaka ny mandalo faniriana.
Ny làlan'i Ayoze Perez hankany amin'ny tantara. Credit ho an'ny Soccer World
Ny taona 2011 sy 2012 dia nanamarika ny teboka teo amin'ny toerany tanora. Tamin'ity taona ity izy dia nandroso ho amin'ny Tenerife B sy A.
Miala amin'ny Real Madrid sy FC Barcelone:
Tsy dia ela loatra i Ayoze dia nanomboka nanam-paharetana tamin'ny Tenerife. Tamin'ny oktobra 2014, i Ayoze dia nahazo ny Breakthrough Player tao amin'ny 2013-14 Segunda División. Nandresy ihany koa izy teo amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo tsara indrindra tao amin'ny 2013-14 Segunda División.
Nanetsika ny laharana ambony indrindra i Ayoze vetivety noho ny fahombiazany tao amin'ny Division Segunda. Nahita izany Real Madrid sy Barcelona nihiaka manodidina azy nandritra ny fahavaratra tamin'ny 2014. Anatin'ireo klioba lehibe izay sahady, Newcastle no tena naneho ny faniriany hanasonia an'i Ayoze.
Fantatrao ve?… Ny anjelin'i Ayoze Perez izay mpilalao baolina kitra koa dia nanapa-kevitra ny handao ny kliobany hanaraka ny rahalahiny any Angletera amin'ny fanantenana hametraka ny tenany amin'ny klioba any. Ireo rahalahy roa nandao ny masoandro Santa Cruz tany avaratr'i Tenerife mba hahatanteraka ny nofiny tany Newcastle.
Samy miaina ny nofinofiny i Ayoze sy Sammy. Bola ho an'ny Tantara velona
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Mitsangàna amin'ny tantara
Ny Newcastle dia nandoa £ 10.000 tapitrisa ho an'i Ayoze izay saram-pako amin'ny tanimboly amin'izao fotoana izao. Rehefa tonga tany Newcastle i Ayoze dia nifindra trano niaraka tamin'i Samuel rahalahiny.
Tsy maintsy nianatra ny hampifanaraka ny tanàna, ny fiteny, ny vahoaka, ny kolontsaina ireo rahalahy roa ireo.
Hoy i Perez indray mandeha. "Tsy nieritreritra an'io toerana io aho, tany Angletera, na inona na inona. Hafahafa ny fahitana, fa tena mahafinaritra i Newcastle. Eny, nifindra niaraka tamin'ny rahalahiko aho rehefa tonga teto. Raha vao nanao sonia aho dia nandray ny fanapaha-keviny hiaraka amiko, nah, tsy nanontany azy mihitsy aho, tonga fotsiny izy! Niaraka izahay rehetra. "
Fotoana tsara ho an'ireo rahalahy tany Tyneside izay antsoin'izy ireo hoe trano. Fotoana tsara, fotoan-tsarotra tamin'ny baolina kitra. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, ny mpilalao baolina miditra an-tsehatra dia manana Manjary ambony sy matanjaka amin'ny fiaraha-miasa misy azy Salomón Rondón.
Ny fiakaran'i Ayoze Perez hitantara tantara. Bola ho an'ny Tantara velona
Tahaka an'i Alan Shearer, i Ayoze dia hotsaroana mandrakariva ho angano Newcastle. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Relationship Life
Miaraka amin'ny fiakaran'ny lazan'i Ayoze Perez ny laza, ny fanontaniana amin'ny molotra tsirairay dia ...Iza moa i Ayoze Perez ny sipany, ny vadiny na ny WAG?.
Ny sipany i Ayoze Perez. Bola amin'ny Instagram
Ny fifankatiavana mety ho an'i Ayoze Perez dia azo antoka fa mandositra ny mason'ny besinimaro fotsiny satria ny fiainany feno fitiavana dia tena tsy miankina. Tao anatin'ny taona maro, Ayoze Perez dia nisafidy ny hifantoka amin'ny asany ary nikatsaka ny hisoroka lanja rehetra amin'ny fiainany manokana. Izany zava-misy izany dia mahatonga antsika ho sarotra ny hahazo fampahalalana mivaingana momba ny fiainam-pitiavany.
Na izany aza, araka ny tatitra iray azo itokisana, i Ayoze Perez dia niaraka tamin'ny sipany vavy tsy fantatra anarana nandritra ny taona 3 talohan'ny nanolorany soso-kevitra. Araka ny FootallImagines;
"Manomboka lavitra an'i Ayoze Perez i Ayoze Perez ary mihevitra izy fa hiara-hiady aminy, saingy mitodika izy fa mikasa ny hanolotra azy (eo amin'ny kianja aorian'ny lalao)." Voalaza fa tokony hanambady izy ireo izao.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Fiainana manokana
Ny fahazoana mahafantatra an'i Ayoze Perez ny fiainanao manokana teo amin'ny baolina kitra dia hahatonga anao hahazo sary feno azy. Manomboka, Perez dia be fitiavana, malala-tanana, be fitiavana ary faly. Izany dia manosotra voaloboka ho an'ny baolina kitra.
Raha vao manomboka, dia olona iray nahazo fahatsapana maro izy rehefa tonga eo amin'ny andraikitra ara-tsosialy miaraka amin'ny ankizy.
Fantatrao ve?… Perez dia ny masoivohon'ny Newcastle. Matetika izy no mianatra any an-tsekoly mba handray anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny baolina kitra.
Ny Fiainam-pianakavian'i Ayoze Perez-Sary amin'ny Instagram
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Avy any Tenerife ka hatrany Tyneside, nahita fianakaviana tao Newcastle ny fianakavian'i Ayoze Perez noho ny fahombiazan'ny zanak'izy ireo faralahy. Ity ambany ity ny lahatsary iray izay maneho ny fotoana mahafaly mahavariana ataon'ny fianakavian'i Perez rehefa mankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ny mpikambana ao amin'ny fianakaviany mahomby.
Raha jerena avy amin'ny kaonty media sosialy ao Ayoze sy ny lahatsarim-pianakaviana etsy ambony, dia ho hitanao fa mora kokoa noho ny reny noho ny reny izy. Na izany aza, AyozeNy fanoloran-tena mba hahazoana antoka fa hampifaly ny ray aman-dreniny sy ny votoaty dia mitovy amin'ny fanoloran-tenany amin'ny baolina kitra.
Ny Renin'i Ayoze Perez. Bola amin'ny Instagram
Bebe kokoa momba ny Rahalahy: Samuel Pérez Gutiérrez dia teraka tamin'ny Mar 23, 1990 izay midika fa telo taona izy noho i Ayoze rahalahiny.
Ny Rahalahin'i Samuel Ayoze Perez. Bola amin'ny Instagram
Ho tsarovana mandrakizay i Big Sammy ho anisan'ny rahalahy be mpitia indrindra amin'ny baolina kitra. Araka ny efa hitanao teo aloha, dia nanao sorona lehibe indrindra izy mba hanampiana ny rahalahiny handamina sy hitazona azy, na dia nanosika ny tari-dalana ho an'ny rahalahiny aza izy.
Fantatrao ve?… Sammy dia lasa mpilalao tsy mpilalao tamin'ny fametrahana tany Newcastle niaraka tamin'ny rahalahiny. Na dia efa fanta-daza aza ny fiakaran'i Ayoze taorian'ny nahatongavany tao Tyneside tamin'ny Jona 2014, ny diany zokiny teo amin'ny diany dia nalaza tsy dia mendri-pankasitrahana loatra.
Mombamomba ny an'i Ayoze Perez Relative Tsy ny zanakalahy lahy rehetra ao amin'ny fianakavian'i Perez dia tafiditra amin'ny raharaham-barotra baolina kitra. Na ny fianakaviana lava kokoa aza. Fantatrao ve?… Ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Ayoze María José Pérez toy ny tamin'ny fotoana nanoratana dia manohana ny Levante UD Femenino ary mpikambana ao amin'ny ekipam-pirenena espaniola ihany koa.
Ayoze Perez's Cousin-María José Pérez. Bola amin'ny YouTube
Raha jerena ny fijeriny, dia ho hitanao fa hitovy ny fitoviana akaiky amin'i Perez.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Lifestyle
Araka ny TransferMarker, i Ayoze Perez dia manana tombam-barotra amin'izao fotoana izao 10,00 Mill. Ny karamany isan-kerinandro amin'ny £ 45,000 dia mahatonga azy ho mpilalao baolina milionera. Tsy midika anefa izany hoe mihatsara ny fiainany.
Manazava i Ayoze mikasika ny fitantanana ny volany amin'ny baolina kitra. Midika izany fa tsy mandany toy ny adala, na manova ny fiainany.
Ny Fiainan'ny LifeStyle an'i Ayoze Perez. Bola amin'ny Instagram
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Untold Facts
Ny anarana hoe "Ayoze"Dia matetika no mandika vilana ny mpankafy baolina kitra sasany avy any Nizeria. Ity anarana ity dia mitovy amin'ny foko Igbo miteny miteny amin'ny firenena Afrikana Andrefana. Ny anaran'i Ayoze Perez koa dia "Ayo". Io anarana io ihany koa dia raisina avy amin'ny foko Yoruba miteny Nizeria
Ayoze Perez dia hita maso, raharaha iray izay nahazo mpankafy sy mpitoraka blaogy diso tamin'ny fisaintsainana ny sarin'i Santiago Munez ny an'i Ayoze nandritra ny fahazazany.
Ahitsin'i Fakam-bao tsy fantatra i Ayoze Pere- eo amin'ny fijeriny-mitovy. Credit amin'ny Twitter
I Ayoze Perez dia teraka tao amin'ny 1990 izay matetika no tsaroan'ny folo taona ho an'izao tontolo izao. Ho fanampin'izany, ny 1990 dia nahita ny nianjeran'ny Firaisana Sovietika sy ny tarika zazalahy (Boyz II Men, Backstreet Boys ary Westlife) no nanapaka ny sarimihetsika mozika.
Ity taona ity dia nahita ny fiakaran'ny Internet (World Wide Web). Ao amin'ny 1990 ihany koa, nalefa ny hafatra SMS voalohany, noforonina ny DVD, navoaka ny Sony PlayStation ary napetraka ny Google. Raha miteny momba ny PlayStation, Ayoze dia mpidoroka FIFA.
Ny tantaran'i Ayoze Perez Untold- A FIFA Lover. Credit amin'ny Twitter
Amin'izao fotoana izao, toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia i Ayoze no laharana 13 ao amin'ny Torolalana ho an'ny tanjon'ny Newcastle. Michael Owen manaraka manaraka.
Ayoze Perez's Newcastle Goal Scoring Rank. Credit amin'ny Twitter
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold Biography Facts- Video Summary
Azafady mba jereo eto ambany, ny fijerin'ny lahatsary YouTube ho an'ity profil ity. Miangavy anao amim-pitiavana ary mifandray aminay Youtube Channel for More Videos.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Ayoze Perez momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
effort jonhera 1 Jolay 2019 Amin'ny 6:16 hariva
te-hihaona foana aho
tao amin'ny mpankafy lehibe avy any Zimbabwe.
Daty efa namboarina: 1 Desambra 2019
Daty efa namboarina: 30 septambra 2019
Mombamomba ny mpanoratra Wilfred Ndidi Childhood Story Plus